ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အဆုံးမဲ့ Runner
Category: - အဆုံးမဲ့ Runner
အဆုံးမဲ့ Runner အားကစားပြိုင်ပွဲ
အဆုံးမဲ့သို့မဟုတ် အဆုံးမဲ့ပြေးသမား ဂိမ်းများကိုအခြေခံအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုသည့်အတိုင်းတစ်ဦးကစားသမားအဆက်မပြတ်ရှေ့တစ်အဆုံးမဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျပြေးသောဇာတ်ကောင်ပေးထားသည်။ တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းတဲ့အဖြစ်ဂိမ်းစေနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူများဇာတ်ကောင်ကျော်အလွန်ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်, တိုက်ခိုက်ဖို့ခုန်များနှင့်အပြေးနေချိန်မှာတချို့အထူးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားဂိမ်းအခြေခံအားဖြင့်အဖြစ်ဝေးသငျသညျမသေဆုံးမီနိုင်အဖြစ်သွားကြဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။ ဂိမ်းများကိုဤမျိုးဟာ android အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ကြပြီ။ အဆုံးမဲ့ပြေးသမား ဂိမ်းကိုလည်းနည်းပါးလာထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကျွမ်းကျင်မှု၏ကစားသမားများအတွက်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကကိုယ့်ခုန်ခြင်းနှင့်အောက်မှာအနည်းငယ်ဘုံဘိုင်လိုအပ်ပါတယ်။
ဂိမ်းများကိုဒီပုံစံအခြေခံအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ပြေးနှင့်အလားတူထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ ဤအဂိမ်းများကိုခုနှစ်တွင်အဆင့်ဆင့်ကိုကောင်းစွာထုတ်လုပ်ပြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် finish ကိုလိုင်းရှိသည်ဖို့ predesigned နှင့်လည်းအဆုံးမဲ့အပြေးသမားထံမှသူတို့ကိုကွဲပြားခြားနားစေရန် Auto-အပြေးသမားအဖြစ်လူသိများတဲ့နေကြသည်ပါပြီ။
အဆုံးမဲ့ပြေးသမားဂိမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာလူကြိုက်များတွေအများကြီးမြင်ကြပြီ။ ရိုးရှင်းစွာအထား, အဆုံးမဲ့ပြေးသမားဂိမ်းအဘယ်သူမျှမမကုန်နိုင်သောဂိမ်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ သင်အတားအဆီး hit သို့မဟုတ်သင်လဲကျသည်အထိသင်သည်အမြဲတစေ run, သို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာအမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုရောက်ရှိ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အမြန်ကစားသဘောသဘာဝရန်အလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ, စွဲလမ်းကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ကြသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစား၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာဂန္အဆုံးမဲ့ပြေးသမား Temple Run (2011) ဖြစ်ပါသည်။
Temple Run နှင့် Temple Run2နှစ်ဦးစလုံးဟာအလွန်လူကြိုက်များအဆုံးမဲ့ပြေးသမားဖြစ်ရပြီ။ တကယ်တော့, Temple Run250 ရက်ပေါင်းသူ့ဟာသူအတွက်သန်း 13 ကျော် downloads, အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံး-ပျံ့နှံ့မိုဘိုင်းဂိမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာတကယ်က Android စျေးကွက်အပေါ်အဆုံးမဲ့ပြေးသမားအမျိုးအစားများ၏လမ်းကြောင်းသစ်စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အပေါ်အခြားဂိမ်းသန်းပေါင်းများစွာနဲ့တူ apps များစတိုးဆိုင်များအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့ကြ Apps ကပ APK ကို.
Sonic အဆိုပါ Hedgehog4အပိုင်း ...
သောမတ်စ် & သူငယ်ချင်းများ: လူမျိုး ...
Power ကဟော့ဗာ: Cruise နဲ့
Sonic အဆိုပါ Hedgehog ™ Classic
PAC-Man: Ralph ဟာဝင်္ချိုး
တစ်ဦးက Fox တူသောအစာရှောင်ခြင်း
Sonic အဆိုပါ Hedgehog2Classic
မြေအောက်ရထား Runners Dash
traffic ကို Run!
လူမျိုးကို run 3D
ပန့်ခ် Runner နှင့်သေနတ်သမား
Assassin အဆုံးမဲ့ Run ကို
အလွန်သေးငယ်သော Archer Runner
မီးခိုးရောင် Cyborg Run ကို
ဂွန်နှင့်အတူအေးမြ Boy Run ကို
စန်တာနှင်းဖုံးကမ္ဘာ့ဖလား Run ကို
Waffle Run ကို
ကမ္ဘာပျက် Runner အခမဲ့